Uru nke Onye Nkọwa ECN na-agba akwụkwọ Brokers na-arụ ọrụ FXCC
Forex ECN Trading Model vs Trading Spread Forex Broker Trading
Ya mere, olee ihe dị iche iche dị iche iche dị n'etiti onye na-ere ahịa ECN / STP na ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ahịa, bụ ndị a na-akpọkarị "ndị na-ere ahịa"? Anyị ejikọtala tebụl dị mfe nke uru na nkwekọrịta, iji depụta isi ihe dị iche n'etiti ECN / Ndị na-ere ahịa STP na ndị na-ere ahịa / na-ere ahịa n'ahịa, mana anyị chere na anyị nwekwara ike ịga na njem ahụ iji kọwaa ihe dị iche iche.
ECN ahia ahia
Mgbasa Brokas Platform na-agbasa
N'elu nhazi ihu ahia nke ahia, onye na-ere ahịa maara ọnọdụ gị, ụdị ahịa na usoro na-eji ozi a mee ihe.
Na FXCC ECN, ị nwere ike ịzụ ahịa n'otu ntabi anya n'ahịa na-asọpụta site na ịmalite Ụlọọrụ Ego.
Ntughari ihe ndi ozo bu ugbua na ahia ahia. FXCC anaghị azaghachi. Igwe ihe omimi nke ikpo okwu na usoro nkwekorita oge / oge na-eme ka ị jupụta ahịa gị na ahịa ahịa ugbu a.
FXCC anaghị ewere ọnọdụ megide ndị ahịa ya ma ọlị.
Ịzụ ahịa n'oge akụ na ụba
FXCC na-enye ndị ahịa niile ohere n'agbanyeghị ahia ahia nke ahia na itinye iwu ọhụrụ n'oge ntọhapụ akụ na ụba. Mgbe ndị a tọhapụrụ, na mgbe ụfọdụ nke achụmnta ego na-adịghị ahụkebe, ịkwanye / inye mgbasa ozi dị oke karịa ndị dị n'oge ọnọdụ 'nkịtị'.
Kedu ụdị azụ ahịa ị bụ?
Ihe ọ bụla ụdị ahịa ị na-ewere onwe gị ịbụ: oge ​​oge, oge zuru ezu, ma ọ bụ onye na-ahụ maka ntụrụndụ na ihe ọ bụla ị nwere ahụmahụ na-adịgide adịgide na-emetụta azụmaahịa, nke ahụ dị mkpa nye ndị ahịa ọhụrụ dị ka ọ bụ ndị nwere ahụmahụ; ụdị ọrụ ịzụ ahịa na-enweta mgbe niile. Ndị ahịa kwesịrị mgbe niile, n'agbanyeghị na ha na-azụ ahịa azụmaahịa, na-abịakwute ịdọ aka ná ntị nke ịzụ ahịa na iji nlezianya dị ukwuu na ọkachamara.
Ịhọrọ Onye na-ere ahịa ziri ezi dị ezigbo mkpa
Ụdị onye na-ere ahia ị na-ahọrọ bụ mkpebi dị oke njọ, nke ga-enwe mmetụta miri emi n'ikike ị nwere ike inwe. Ị ga-ahọrọ onye na-arụ ọrụ na-edozi ihe, ma ọ bụ onye na-arụ ọrụ na-edozi ihe? Ọ bụ nhọrọ ziri ezi na ajụjụ, otu anyị ga-aza ozugbo. Ndị ahịa siri ike, ndị na-azụ ahịa, ndị zụlitere ọkachamara ọkachamara na ịbịaru nso, kwesịrị ịhọrọ usoro ECN / STP n'oge ọ bụla ma anyị ga-edepụta ụfọdụ n'ime ihe kpatara ya.
Mbụ, ọtụtụ ndị ahịa FX bụ ndị ahia ma ọ bụ ndị na - ahụ maka ahịa - ndị ahịa ha nwere ike ịsị na sekọnd, nkeji, ma ọ bụ oge ndị ahịa FX ndị a adịghị ejide FX ahịa n'abalị. Ya mere, ọ ga-abụ mkpebi dị mfe iji kpebie ma ị ga - achọ ka ị gbasaa ngwa ngwa, ma na - akwụ ụgwọ ọrụ site na ahia ya na onyeahịa ECN / STP, na - agbasawanye ma na - akwụghị ụgwọ ọrụ ọ bụla.
Ndị na-ere ahịa oche "na-ere ahịa", ahịa ha. Ha nweere onwe ha ikwu ọnụahịa ha (na-adabere na ndepụta nke ọnọdụ mgbanwe ha) nke nwere ike ịgụnye ọnụ ọgụgụ ha dị na ya, dabere na olu nke azụmahịa ha na-eduzi maka ndị ahịa ha. Ya mere akwukwo ha bu uzo okwu.
Okpokoro oche na-emekarị ugboro ugboro, nke nwere ike ịpụta mma ma ọ bụrụ na ha na-ekwu na a ga-agbasapụ, dịka ọmụmaatụ, otu pip na EUR / USD. Otú ọ dị, ndị ahịa nwere ike ịnweta nchapu na ihe ndị na-adịghị mma, nke pụtara na ihe a na-eme ka ha jupụta na ezigbo ahịa ahịa na mgbasa ahụ dị nso na abụọ, ma ọ bụ atọ pips kwa azụmahịa. Onye na-arụ ọrụ na oche ahụ nwere ike ịkwụsị itinye usoro ahụ iji gbalịa nweta ezigbo ego maka onye na-ere ahia.
Otú ọ dị, site na nnukwu ọdịiche dị n'etiti ndị na-arụ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na ndị ECN / STP Broka bụ eziokwu na ndị na-emepụta ego na-eme ka ndị ahịa ha kweta. Ọ bụrụ na onye ahịa na-edozi ihe na-enweta ya mgbe ahụ, onye na-ere ahịa na-efunahụ ya, ha na-ebu ụzọ zie aka megide onye ahịa ahụ. Ugbu a ka a pụrụ ikwu na esemokwu dị ukwuu na onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-anọchi anya na ihe ga-esi na ya pụta, eziokwu ahụ bụ na onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-achọ uru ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ efunahụ ya.
Na atụmatụ ECN / STP, mgbasa ozi ndị ahụ na-agbanwe agbanwe, dabere na ezi ọnọdụ ahịa n'oge ọ bụla etu ọnụahịa nke ndị na-enye ego nyere; gụnyere isi ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ndị na-enye aka na kọmputa na-ahazi netwọk. Ndị ahịa na-akwụ ụgwọ azụmahịa ntakịrị maka ahia ọ bụla, ọ dịghịkwa ọkwa ọ bụla e nyere. Site na onye na-ere ECN / STP, ha na-aghọ ala mmiri, a na-eduzi n'etiti ahịa na ahịa. Onye na-azụ ahịa na-aga n'ihu ahịa site na kọntaktị eletrik na-arụ ọrụ n'enweghị ihe mgbochi ọ bụla, enweghị nnyonye anya ma ọ bụ aka. Ọnụ ahịa ndị a sitere na netwọk ahụ, mmiri ọdọ mmiri nke ndị na-atụnye ụtụ na-emepụta.
N'ihe nlereanya ECN / STP, ọ dịghị mgbe ọ bụla ị gụgharịrị, iwu niile jupụtara na ọnụahịa kachasị mma n'oge ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, ọnụego ndị a nwere ike ịbụ ezigbo uru, dị ka obere dị ka obere pasent nke pip, ikekwe 0.1 dabere na olu ọrụ n'ime ECN ma nke ahụ na-ewetara anyị uru ọzọ bara uru nke ịzụ ahịa site na onye ọrụ ECN / STP; omimi nke ahịa.